မြ၀တီမြို့တွင် လျှပ်စစ်မီး တစ်ယူနစ် (၆ . ၅)ဘတ်အထိ တိုးမြှင့်မည်ဟု သတင်းထွက်ပေါ် (ပေးစာ) ~ ဒီမိုဝေယံ
မြ၀တီမြို့တွင် လျှပ်စစ်မီး တစ်ယူနစ် (၆ . ၅)ဘတ်အထိ တိုးမြှင့်မည်ဟု သတင်းထွက်ပေါ် (ပေးစာ)
မြ၀တီမြို့တွင် လျှပ်စစ်မီး တစ်ယူနစ် (၆ . ၅)ဘတ်အထိ တိုးမြှင့်မည်ဟု သတင်းထွက်ပေါ်
မကြာသေးမီလပိုင်းက (၂၄)နာရီ လျှပ်စစ်မီး ကန်ထရိုက်ရရှိခဲ့သော ကရင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းနှင့် မြ၀တီ ကုန်သည်ကြီးများအသင်း ဥက္ကဌ ဒေါ်သင်းသင်းမြတ် (အာဇာနည် ကျောက်တိုင်ကို ဝယ်ယူသူပိုင်ရှင်) တို့သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများ ပိုမိုတိုးချဲ့ ဖြန့်ဖြူးနိုင်ရန်အတွက် ယခင် ကော်မတီအဖွဲ့မှ တစ်ယူနစ် (၄. ၅)ဘတ် ကောက်ခံနေရာမှ ၄င်းတို့(၂)ဦး ကန်ထရိုက် လုပ်ပိုင်ခွင့် ရလာသောအခါ ပြည်သူလူထူအပေါ် တစ်ယူနစ် (၆. ၅)ဘတ်အထိ တိုးမြှင့် ကောက်ခံမည်ဟု ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများထံမှ သိရှိရပါတယ်။
ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်မှ ကန်ထရိုက်ရ ယူလိုက်သည့်အတွက် (၂၄)နာရီ လျှပ်စစ်မီး လိုင်းမန်းများ အဆင့်မြင့် တိုးတက်လာတာကိုတော့ တွေ့ရပါတယ်။ ယခင်ကတော့ လိုင်းမန်းတွေဟာ သာမန်အရပ်သားဖြစ်ပြီး ယခုအခါမှတော့ ထွေ/အုပ် ယူနီဖောင်းဝတ်တဲ့ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးမြင့်တင် နဲ့ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသိန်းဇော်ကံ တို့ပါ လခနှင့် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်လာကြတာ တွေ့ရပါတယ်။
ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တွေကော၊ ခရိုင်/မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကော ပြည်သူလူထုအတွက် ရေ၊ မီး နှင့် လမ်းများ ကောင်းမွန်အောင် မလုပ်နိုင်ကြသော်လည်း ၎င်းတို့ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် တွဲဖက်ကာ (၂၀၁၅) ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကို အားသွန်ခွန်စိုက် ပြုလုပ်နေကြရပါတယ်။ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ကတော့ ဘန်ကီမွန်းထက်တောင် အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်။ နေ့တိုင်း/ ညတိုင်းအစည်းအဝေးတွေ လုပ်သလောက် ဘာမှတိုးတက်အောင် မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ လမ်းတွေလည်း စုတ်ပြတ်၊ မီတာခလည်းဈေးကြီး၊ ပြည်သူတေလည်း ဆင်းရဲသထက်ဆင်းရဲ လာကြပါတယ်။ အစည်းအဝေးတွေမှာလည်း သူ့လောက်တတ်တာ သူပဲရှိတယ်လို့ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူတွေက ဝေဖန်ကြပါတယ်။ ဘာမှ မတတ်တဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးတွေ ထက်တော့ သူသာတယ်လို့လည်း ဝေဖန်ကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ ဆင်းရဲနွမ်းပါး ပပျောက်ရေးစီမံချက်ဟာ အလွန်အောင်မြင်ပါတယ်။ နေ့စဉ် ပြည်သူတွေဟာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဈေးအနိမ့်ဆုံး ကျွန်အဖြစ် သွားရောက် လုပ်ကိုင်နေကြရလို့ပါပဲ။ ကရင်ပြည်နယ်ရဲ့ အသက်သွေးကြောဟာ မြ၀တီဖြစ်တာကြောင့် မြ၀တီက ရသမျှကို ချမ်းသာဖို့ လုပ်နေပါတယ်။ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ အာဏာရှင်ဆန်ဆန် အုပ်ချုပ်မှုကြောင့် ခရိုင်နဲ့ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေလည်း အာဏာရှင်သဖွယ် ငါတို့ စစ်တပ်ကလာတာဆိုပြီး မြ၀တီမြို့ ပြည်သူတွေအပေါ် အမြဲလိုနိုင်ထက်စီးနင်းလုပ်ကြပါတယ်။ အရပ်သား ၀န်ထမ်းတွေအပေါ်လည်း စစ်တပ်က လာတဲ့သူနဲ့ ရိုးရိုးအရပ်သား စစ်စစ်တို့အပေါ် ခွဲ့ခြားဆက်ဆံလာကြပါတယ်။
အခုလို ပြည်သူ့ဆန္ဒမပါပဲ လျှပ်စစ်မီတာခ တိုးမြှင့်လိုက်တာဟာ မြ၀တီမြို့ပြည်သူတွေအတွက် အတော်လေး ဒုက္ခရောက်ပါတယ်။ အခြားမြို့အတော်များများမှာ လျှပ်စစ်မီးမရလို့ ဖယောင်းတိုင်မီးထွန်း ဆန္ဒပြကြပေမယ့် မြ၀တီမှာတော့ လျှပ်စစ်မီးရပြီး မီတာခဈေးတက်တာကြောင့် ဖယောင်းတိုင်မီးထွန်းပြီး ဆန္ဒပြလာနိုင်မည်ကို အလွန်စိုးရိမ်မိပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ ယနေ့ရန်ကုန် ဖယောင်းတိုင် ထွန်းညှိ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲ (Getty Images)